मेसीले सातौंपल्ट बालोन डिओर जित्दा रोनाल्डो कति नम्बरमा परे ? - ramechhapkhabar.com
मेसीले सातौंपल्ट बालोन डिओर जित्दा रोनाल्डो कति नम्बरमा परे ?
अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनेल मेसीले कीर्तिमानीरुपमा सातौंपल्ट बालोन डिओरको अवार्ड हात पारेका छन् । यस अघि २००९, २०१०, २०११, २०१२, २०१५ र २०१९ मा मेसीले फुटबलका उत्कर्ष खेलाडीलाई दिइने यो प्रतिष्ठित अवार्ड हात पारेका थिए । २०२१ को पनि अवार्ड हात पारेपछि मेसीले कीर्तिमानलाई बलियाे बनाएका छन् ।
मेसीले पहिलो नम्बर रहेर अवार्ड जित्दै गर्दा उनका १५ वर्षदेखिका निरन्तरका प्रतिस्पर्धी पोर्चुगिज रोनाल्डो भने यसपटक छेउछाउसम्म पनि पुगेनन् । मेसीले अर्जेन्टिनालाई कोपाको उपाधि दिलाउन मुख्य भूमिका खेलेर उपाधि जित्दा रोनाल्डो भने छैठौं नम्बरमा परे । मेसीले गत वर्ष ४१ गोल गर्दा १७ असिस्टसमेत गरेका थिए । राेनाल्डाेकाे प्रदर्शन अाैसत रहेकाे थियाे ।
बालोन डिओरमा दोस्रो नम्बरमा पोल्याण्डका रोबर्ट लेवान्डोस्की परे । उनले २०२० मा ४७ गोल र २०२१ मा ६४ गोल गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष मुख्य दाबेदार भए पनि कोभिडको कारण यो अवार्ड वितरण गरिएको थिएन । याे वर्ष धेरै गाेल गरे पनि उनीसँग ठूला उपाधि नहुँदा बालाेन डिअाेर जित्न सकेनन् ।
तेस्रो नम्बरमा इटालीका जोर्गिन्हो परे । उनी सम्मिलित इटालीले युरोकप र क्लब चेल्सीले च्याम्पियन्स लिग जितेको थियो । चौथोमा करिम बेन्जमा, पाँचौंमा कान्टे, छैठौंमा रोनाल्डो, सातौंमा मोहम्मद सलाह, आठौंमा केभिन डे ब्रुइने, नवौंमा केलियन एमबाप्पे, जियानलुइजी डुनारुम्मा परेका छन् ।
ब्रजिल र पीएसजीका फरवार्ड नेयमार चोटको कारण आठ सातासम्म मैदान बाहिर रहन सक्ने भएका छन्। बीबीसीका अनुसार गोलीगाँठोको लिगामेन्टमा असर परेसँगै उनले अबको आठ साता फुटबल खेल्न नसक्ने भएका हुन्।
पीएसजीले दिएको जानकारीअनुसार आइतबार भएको सेन्ट एटियनविरुद्धको खेलको अन्तिम समयमा उनी चोटग्रस्त भएका थिए। उनले अब लिग वान र च्याम्पियन्स लिगको केही खेल गुमाउनेछन्। पीएसजी फ्रान्सेली लिग वानमा १२ अंकको अग्रतासहित शीर्षस्थानमा छ भने च्याम्पियन्स लिगमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अन्तिम १६ मा पुगेको छ।